7w 15w 25w 35w 50w 50w Tambo yeEphanthe yakanamatira LED inodonha,Led Pasi Chiedza,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - China 7w 15w 25w 35w 50w 50w Tambo yeEphanthe yakanamatira LED inodonha, Manufacturer & Supplier
7w 15w 25w 35w 50w 50w Tambo yeEphanthe yakanamatira LED inodonha. Chiedza chedu chakadzivirirwa kana kutonhorera (uyewo chiedza chechiCanada Chirungu, dzimwe nguva chinogona kujekesa (nokuda kwekanyoro) muAmerica Chinyorwa) chigadzirisheni chakakonzerwa muchivako chisina kuvhara mudenga. Kana yakagadziriswa inoita seine chiedza chichibvira kubva pakadzika mudenga, kuisa chiedza mumugwagwa wakadzika sewaya yakazara floodlight kana kuti nzvimbo yakajeka. Mhando yakawanda yekushanda kwemazuva ekudzivirira kwe LED, magetsi emadenga emhepo anopa kutarisa kwemazuva ano uye kunzwa. Kuvhenekera mumutambo uyu kwakanyatsoshanda nesimba nehupenyu hwemazuva mazhinji, zvichibvumira kuchengetedza zvakanyanya pamigodhi yemagetsi uye mari yezvigadziridzo zvemarambi paunenge uchipa chiedza chakabuda. Kutungamirirwa kwedu uye rusvingo chiedza zvose zvinotungamirirwa.( 7w 15w 25w 35w 50w 50w Tambo yeEphanthe yakanamatira LED inodonha )
7w 15w 25w 35w 50w 50w Tambo yeEphanthe yakanamatira LED inodonha